Ny Kaominina Metropolitan Ankara dia hanova ny fandaharana seza ho an'ireo sarety ao Ankaray miaraka amin'ilay rafi-pitaterana maivana eo anelanelan'i Dikimevi sy AŞTİ. Mijanona ho misy seza roa na seza vaovao laharana amin'ny sarety Ankaray [More ...]
Kocaeli Metro Line Projects and Studies Fahafahana
Kocaeli Metro Line Projects and Studies Feasibility Studies; Ny tetik'asa North Light Rail Line (HRS / LRT) ary ny fandalinana azo atao dia efa nomanina mifanaraka amin'ny fitakian-dàlana voafaritra ao anatin'ny sehatry ny drafitra Master Kocaeli Transportation (KUAP). avaratra [More ...]
Ny ben'ny tanàna ao amin'ny tanànan'i Bursa Metropolitan Alinur Aktas, ny rafitry ny rafitry ny lalamby ao Metropolitan miaraka amin'ny fandalinana fikarohana fanamafisana dia hitombo ny fampiononana ny fitaterana, hoy izy. Tanànan'ny Greater Bursa, izay nanao sonia ny vahaolana miafin'ny fitaterana, [More ...]
Bursaray Metro: ny lalana BursaRay dia niditra tao amin'ny Station Mudanya Road Lab Station ary West tao amin'ny Station Acemler. Avy eo, manaraka ny làlana Ankara, manomboka amin'ny City Square mankany Şehreküstü Square ary Haşim İşcan [More ...]
Siemens dia nandresy tamin'ny famatsiana fiara 25 fanampiny ho an'ny San Diego Light Rail System ary nanao sonia fifanarahana miaraka amin'ny orinasa MTS ao San Diego. 53 rafitra lalantsara jiro [More ...]
Marmaray Expedition Times: Ny fananganana ny tetikasa Marmaray, izay hampifandray ny lalamby eo amin'ny andaniny roa amin'ny Bosporus, dia mitohy haingana. Ny lalamby lalamby no mamakivaky ny Bosporus ary mifandray amin'ny lalamby lalamby. [More ...]
Abu Dhabi Metro Tender. Ny sehatry ny asa ho an'ny tetikasa dia ahitana ny fananganana tambajotra ambanin'ny tany ao Abu Dhabi. Abu Dhabi Metro dia nomanina ho anisan'ny tambajotra goavana ho an'ny tanànan'i Abu Dhabi [More ...]
Ny kaominina ambanivohitra Ankara Metropolitan, izay manome serivisy olona ho an'arivony maro isan'andro ao Ankara ary manome lanja lehibe ny fahadiovana eo amin'ireo fiara fitateram-bahoaka, izay mampihena tokoa ny lozan'ny lozotra eto an-drenivohitra, dia mitondra ny fanadiovana ny 7 / 24. Metropolitan [More ...]
Raha ny marina,… Raha ny faran'ny fitateram-bahoaka, ny rafi-pitaterana dia toa vahaolana lehibe indrindra ho an'ny tanàna toa an'i Bursa izay maniry avy any atsinanana ka hatrany andrefana. Na izany aza,… ny rafitry ny Rail dia manana ny sokajy azy ihany. Jiro ao Bursaray [More ...]
Ny olana lehibe indrindra ao Bursa dia ny fitaterana. Ny valin'ny fanadihadiana na ny mikrô na ny tànan'ny mpitatitra ny olom-pirenena na ny mpitantana ao an-toerana dia manondro ny olana mitovy. Ben'ny tanànan'i Bursa Alinur Aktaş, ity [More ...]
Ny ben'ny tanànan'i Bursa Alinur Aktaş, miaraka amin'ny distrika 17 any Bursa manontolo, dia hiantoka fa ny drafitra lehiben'ny fitaterana dia ho tonga amin'ny fivorian'ny kaominaly Metropolitan amin'ny Janoary, aorian'ny fampiharana ny fankatoavana. [More ...]